Orinasa mpanamboatra slipper gel any Sina | Huanyi
ba kiraro fitsaboana mangatsiaka
Kiraro fitsaboana gel fitsaboana mangatsiaka azo ampiasaina indray, fitsaboana gilasy fanamaivanana haingana ho an'ny tongotra reraka sy mivonto, tongotra mafana, fanamaivanana amin'ny fanaintainan'ny neuropathy vokatry ny diabeta sy ny fitsaboana ara-simika.
Namboarina tamin'ny lamba namboarina, ny tsininay mangatsiaka azo ampiasaina indray dia mora ampiasaina ary ny gel mangatsiatsiaka dia ampidirina ao ambanin'ny ambany sy feno tampon'ireo kapaoty ho an'ny fampangatsiahana tsy tapaka an'ny tongotra.
Ny orinasa dia dinihin'i BSCI, ny vokatray dia voamarin'ny SGS, CE, FDA.
Factory dia nohamarinin'ny BSCI, ny vokatray dia voamarina amin'ny SGS, CE, FDA.
10 taona niainana ny OEM, ODM. Afaka manome anao soso-kevitra matihanina amin'ny loko namboarina, logo, fonosana, fanampiana amin'ny famolavolana vahaolana tsara indrindra ho an'ny vokatra fanamaivanana ny fonosana mangatsiaka.
Ho an'ireo mpitsabo gel fitsaboana mangatsiaka mangatsiaka, ny orinasanay dia manana habe sy safidy loko isan-karazany, ohatra ny manga manga, manga manga, mavokely, mainty.
Mifandraisa aminay amin'ny lisitry ny vidiny farany!
Tsotra ny fampiasana kapaoty gel fitsaboana tery mangatsiaka ho an'ny fikarakarana tongotra:
Tsotra sy mahomby, ny slipper gel anahitrika dia vahaolana fitsaboana mangatsiaka ao an-trano hahitana fanamaivanana ao anatin'ny minitra vitsy, azonao atao ny manisy loko isan-karazany ho an'ny mpianakavy hafa, hiara-mankafy ny miala sasatra miaraka.
1.Azo antoka ve ny vokatrao mba hitehirizana sakafo na vatan'olombelona?
Ny fitaovantsika PVC, PE, Nylon, Lycra, Gel rehetra dia tsy misy poizina amin'ny tatitra FDA, MSDS, CE.
2. Inona ny MOQ-nao?
Amin'ny ankapobeny MOQ matetika dia mpivady 1000 na 2000. Raha mila manana lamba sy kofehy fitehirizana izahay dia afaka mifampiraharaha miankina amin'ny toe-javatra hanomezana fanohanana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa hitsapana ny tsena
3. Inona ny fanontam-pirintinao?
Afaka manao pirinty vita amin'ny landy isika, manonta offset, manonta UV na mametraka sticker. Hisafidy fomba fanontana mety aminao araka ny volavolanao.
4. Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
mandoa vola 30% aorian'ny baiko nohamafisin'ny T / T. Azontsika atao ny manaiky ny L / C arakaraka ny hamaroan'ny filaminana.
5. Afaka manome santionany maimaimpoana ve ianao?
eny 1-3 santionany maimaimpoana maimaim-poana ho anao raha ho entina ny entana. Raha mila manaingo ny sary famantarana na ny endrikao ianao, dia mila miady hevitra momba ny sarany santionany arakaraka ny fanontana na ny vidin'ny maodely.
Previous: fonosana amam-tànana amin'ny fonosana gilasy
Manaraka: Kaosy fitsaboana fitsaboana mangatsiaka ho an'ny fikarakarana tongotra
Fonosana gilasy tsara indrindra ho an'ny tongotra
Pads amin'ny tongotra tongotra mangatsiaka